के हिल फेरबदल गर्न मिल्ने जुत्ताहरुले महिलालाई राहत मिल्ला त ? |
के हिल फेरबदल गर्न मिल्ने जुत्ताहरुले महिलालाई राहत मिल्ला त ?
प्रकाशित मिति :2017-10-12 15:16:34
‘एउटा केटीलाई सही प्रकारको जुत्ता दिनुहोस् र उनले संसार नै जित्न सक्छिन्,’ अभिनेत्री म्यारलीन मुन्रोले एक पटक भनेकी थिइन् । तर, अहिलेको जमानामा कुन–कुन महिलालाई के–के “सही” लाग्छ त ?
हिलवाला जुत्ताले प्रयोगकर्तालाई बढी आत्मविश्वासी बनाउन मद्दत पु¥याएपनि लामो समयसम्म लगाउँदा असहज महसुस हुन्छ । त्यसकारण धेरै महिलाले हिल नभएका जगेडा जुत्ता आफ्नो साथमा लिएर हिँड्ने गरेका छन् । तर, जगेडा राखेको एक जोडी जुत्ताले अग्लो देखाउने र सुविधा दिने दुवै काम गर्न सकेन भने के गर्ने ? फ्रान्स र जर्मनीका जुत्ता बनाउने साना दुईवटा फर्महरुले समाधान खोज्ने जमर्को गरेका छन् र महिलाले प्रयोग गर्ने जुत्ताहरु थरिथरिका हिलहरु फेर्न मिल्ने गरी बनाएका छन् ।
ओल्गा स्ट्रेचेन्को क्यानाडाको ओट्टावामा रहेको उनको कार्यलयमा वरिष्ठ वित्तिय जोखिम व्यवस्थापककोरुपमा मात्र परिचित छैनन् । ४६ वर्षीया व्यवस्थापक हिल फेरेर लगाउन मिल्ने जुत्ता सौखिनको रुपमा पनि प्रख्यात छिन् ।
‘म त्यति अग्लो मान्छे होइन । त्यसैले मलाई अग्लो जुत्ता कार्यालयमा लगाएर मेरो व्यक्तित्व र प्रस्तुति बढाउन मन लाग्छ,’ ओल्गा भन्छिन्, ‘तर घर फर्कने बेलामा भने साना हिल भएका, बढी आरामदायी जुत्ता लगाउन मन लाग्छ । कार्यालय समयपछि घुमघामलाई जान मन लाग्यो भने म मेटालीक हिल प्रयोग गर्न रुचाउँछु र त्यस्तै हिल बोकेर हिँड्छु ।’
तान्या हिथ प्यारीसबाट तयार पारिएका जुत्ताहरुले महिलालाई आफ्नो आवरण बदल्न एउटै जुत्ता तर फरक खालका हिलहरु प्रयोग गरेर एकै छिनमा व्यवसायिकदेखि अनौपचारिक, अग्लोदेखि होचो देखिन र झिलिक्कदेखि आरामदायी बन्न सघाउन सक्ने भएका छन् ।
डिजाइनर तान्या हिथलाई नयाँ ढाँचाका जुत्ता बनाउने सोच सन् १९९६ मा पेरिस गएपछि आयो । वर्षौंसम्म टेलिकम र उर्जा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव बटुलेकी तान्या हिथलाई कार्यालय आउँदा र फर्कंदा पटक–पटक जुत्ता फेर्नु पर्दा झन्झट र दिक्क लाग्थ्यो ।
सन् २००९ मा फेशन उद्योगको केही पनि अनुभव नभएपनि जुत्ताको ढाँचाको बारेमा हिथले सोच्न थालिन् । उनलाई त्यति बेला तीनवटा बच्चाहरु हुर्काउने जिम्मेवारी पनि थियो ।
उनको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौति भनेको आरामदायी भइकन आकर्षक देखिने जुत्ताहरु बनाउनु थियो । सन् १९८० को दशकमा धेरै फर्महरुले राख्न र झिक्न मिल्ने हिलसहितका जुत्ताहरु बनाउन थाले पनि ती बजारमा सफल भएनन् । कुनै हेर्दै नराम्रा थिए । कुनै हिल खस्ने खालका थिए ।
डिजाइनर र इन्जिनियरहरुका टोलीको सहयोगमा, उनले जुत्ताको अग्लाइ छान्न र जडान गर्न मिल्ने अवधारणा बनाइन् ।
उनका अनुसार पहिले आफ्नो रोजाइको जुत्ता (चप्पल ढाँचाको, कुर्कुच्चा छोपिने वा बुटवाला किन्न सकिन्छ) र त्यही जुत्तामा जडान गर्न मिल्ने आफूलाई चाहिने फरक–फरक खालका हिलहरु छुट्टै किन्न सकिन्छ ।
ग्राहकले ४ सय प्रकारका हिलहरु मध्ये छनौट गरी किन्न सक्छन् । एउटा हिललाई ३ हजार देखि १२ हजारसम्म नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
हिथ भन्छिन्, ‘व्यापार गर्दा सुरुका वर्षहरुमा उनलाई धेरै गाह्रो भयो । जुत्ता बिक्री पनि भएनन् र अरुले पनि लगानी गरेनन् ।
अहिले त्यो फर्मले ७२ वटा देशहरुमा माग अनुसार सामान पठाइसकेको छ र फ्रान्स, पोर्चुगल र क्यानाडामा बुटीकहरु खोलेको छ ।
यो फर्मले गरेको राम्रो व्यापारको समाचार सँगसँगै विभिन्न पेसामा आवद्ध र जागीरे महिलाले अनिवार्यरुपमा हिलवाला जुत्ता लगाउनु पर्ने चलनले उनीहरुमा पर्ने नकारात्मक असरहरु बारे विकसित देशहरुमा विवाद र बहस चलिरहेको छ ।
गत अप्रिल महिनामा क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बीया प्रान्तमा महिलालाई ठुला हिल जुत्ताहरु लगाउन बाध्य पार्नबाट कम्पनीहरुलाई रोक लगाइयो । तर, त्यसै महिना बेलायती सरकारले त्यस्तै रोक लगाउन बेलायतमा गरिएको निवेदनलाई भने अस्वीकार ग¥यो ।
राख्न र झिक्न मिल्ने विभिन्न हिलहरुसहितका जुत्ताहरु बनाउने फर्महरुले आफ्ना उत्पादन मार्फत् महिलाको व्यक्तिगत फेशन रोजाइको दायरा बढाइदिएका छन् ।